Blood shed in Ngwe Kyar Yan Monestery in Rangoon by Burmese junta
စစ်တပ်ေုကာင့် သံဃာသြေးေူမကဵရသည့် ငြေုကာရံ ဘုန်ုးကီးကေဵာင်ူးမင်ကငြ်း
တောင်ဥက္ကလာ ငြေုကာရံ ဘုန်ုးကီးကေဵာင်ိးံငြ့် ရန်ကင်း မိုးကောင်းကေဵာင်းတိုက်တိုႚကို ယနေႚ မနက်လင်းအာုးကီးတငြ် စစ်တပ်က အုကမ်းဖက်ဝင်ရောက် စီးနင်ူးပီး သံဃာတော်မဵားကို သြေးေူမကဵအောင် ကဵြးလန်ြခဲု့ကသည်။ ဘုန်ုးကီးကေဵာင်းကို ၀ိုင်ူးပီး အော်ဟစ်ကန်ကေဵာက်ူခင်း၊ ရိုက်ိံက်ြဖမ်းဆီူးခင်ိးံငြ့် ဖဵက်ဆီူးခင်းတိုႚကို သံဃာတော်မဵား ပရိတ်ရတ်ြနေသံမဵာုးကားမြ ၀င်ရောက် ကဵြးလနြ်ူခင်ူးဖစ်သည်ဟု သက်သေမဵားက ဆိုသည်။
ပုံမဵားကို အမဵားအူမင် သက်သေအတကြ် မိုးမခမြ တင်ူပလိုက်ပၝသည်။
(ဓာတ်ပုံ - Photos by MoeMaKa Volunteer Reporters inside Rangoon)
hi from new york city,
i work with the indymedia newspaper The Indypendent and we want to publishaphoto essay on the Burmese resistance in our upcoming issue. Is it possible to email us these photos ofahigher resolution? We are on deadline soaquick response would be great. You can visit our newspaper: www.indypendent.org.